Ego Ọ̀ Bụ Mkpọrọgwụ nke Ihe Ọjọọ Niile? Ka Ọ Bụ “Ịhụ Ego n’Anya”?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Batak (Toba) Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German German Sign Language Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mapudungun Maya Myanmar Ndonga Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Tetun Dili Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Mba. Baịbụl ekwughị na ego bụ ihe ọjọọ, o kwughịkwanụ na ọ bụ ego mere e ji nwee ọtụtụ ihe ọjọọ juru n’ụwa. Ndị mmadụ na-ekwukarị na “ego bụ mkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile,” ma nke a abụghị otú Baịbụl si kwuo ya, ọ na-emekwa ka a ghọtahie ihe Baịbụl kwuru. N’eziokwu, ihe Baịbụl kwuru bụ na ‘ịhụ ego n’anya bụ mkpọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile.’ *​—⁠1 Timoti 6:​10, Bible Nsọ nke Union Version.
Gịnị ka Baịbul kwuru banyere ego?
Gịnị mere Baịbụl ji dọọ aka ná ntị gbasara ịhụ ego n’anya?
Olee otú ndụmọdụ Baịbụl nyere gbasara ego ga-esi baara anyị uru?
Amaokwu Baịbụl ndị kwuru gbasara ego
Baịbụl kwuru na ego na-egbo mkpa ma e jiri ya mee ihe bara uru. O nwedịrị ike ịbụ “ihe nchebe.” (Ekliziastis 7:12) Ihe ọzọ bụ na Baịbụl jara ndị na-emesapụ aka mma, ego nwekwara ike iso n’ihe e ji emesapụ aka.​—⁠Ilu 11:⁠25
N’otu oge ahụ, Baịbụl dọkwara aka nà ntị gbasara mmadụ iwere ịchụ ego ka ihe kacha mkpa ná ndụ. O kwuru, sị: “Ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke ịhụnanya ego na-adịghị na ya, ka unu nọ na-enwe afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a.” (Ndị Hibru 13:⁠5) Ihe anyị mụtara ebe a bụ na anyị ekwesịghị ikwe ka ego bụrụ ihe kacha mkpa ná ndụ anyị, ma ọ bụ chọwa ịba ọgaranya. Kama nke ahụ, anyị ga-agbalị ka ihe ndị dị anyị mkpa anyị na-enweta ju anyị afọ, dị ka nri, uwe na ebe obibi.​—⁠1 Timoti 6:⁠8.
Ndị anyaukwu agaghị enweta ndụ ebighị ebi. (Ndị Efesọs 5:⁠5) Otu ihe kpatara ya bụ na anyaukwu dị ka mmadụ ikpere arụsị. (Ndị Kọlọsi 3:⁠5) Ihe ọzọ bụ na, ka ndị anyaukwu na-agbalị inweta ihe ndị ha chọrọ, ha anaghị eme ihe ndị ha maara dị mma. Ilu 28:20 kwuru na “onye ọ dị ngwa ngwa ịba ọgaranya agaghị abụ onye aka ya dị ọcha.” Ha nwedịrị ike ime ihe ọjọọ ndị dị ka igwu mmadụ wayo, ịpụnara mmadụ ihe, ịtọrọ mmadụ, ma ọ bụ igbu mmadụ.
Ọ bụrụgodị na ịhụ ego n’anya emeghị ka mmadụ kpawa àgwà ọjọọ, o nwere ike inwe nsogbu ndị ọzọ ọ ga-akpata. Baịbụl kwuru na “ndị kpebisiri ike ịba ọgaranya na-adaba n’ọnwụnwa na ọnyà na ọtụtụ ọchịchọ ndị amamihe na-adịghị na ha, ndị na-emerụkwa ahụ́.”​—⁠1 Timoti 6:⁠9.
Ọ bụrụ na anyị ejighị n’ihi ego kwụsị ime ihe ndị anyị ma na ọ dị mma nakwa ihe ndị na-atọ chineke ụtọ, anyị ga-enwe ùgwù, Chineke ga-elekwa anyị anya ọma ma na-akwado anyị. Chineke kwere ndị na-agbalịsi ike ime ihe ndị dị ya mma nkwa, sị: “M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.” (Ndị Hibru 13:​5, 6) O kwekwara anyị nkwa na “onye na-eme ihe n’ikwesị ntụkwasị obi ga-enweta ọtụtụ ngọzi.”​—⁠Ilu 28:⁠20..
Ekliziastis 7:12: “Ego bụ ihe nchebe.”
Ihe ọ pụtara: E jiri ego mee ihe bara uru, ọ na-egbo mkpa n’ihi na o nwere ike ichebe mmadụ.
Luk 12:15: “Ọbụna mgbe mmadụ nwere ọtụtụ ihe, ihe o nwere adịghị eme ka ọ dị ndụ.”
Ihe ọ pụtara: Ego abụghị ihe kacha mkpa ná ndụ, ọ gaghịkwanụ azọpụta anyị.
1 Timoti 6:10: “Ịhụ ego n’anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile. Site n’ịchụso ụdị ịhụnanya a, e duhiewo ụfọdụ, ha wee dapụ n’okwukwe. Ha wee jiri ọtụtụ ihe mgbu maa onwe ha aghara aghara dị ka mma.”
Ihe ọ pụtara: Ego n’onwe ya adịghị njọ. Ma ndị hụrụ ego n’anya, ndị weere na inwe ego bụ ihe kacha mkpa ná ndụ, na-akpatakarịrị onwe ha nsogbu. Nsogbu ndị dị ka ezinụlọ ha itisa nakwa ịkpatara onwe ha ọrịa n’ihi ịrụgbu onwe ha n’ọrụ.
Ndị Hibru 13:5: “Ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke ịhụnanya ego na-adịghị na ya, ka unu nọ na-enwe afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a.”
Ihe ọ pụtara: Kama ịna-achụ ego ọnwụ ọnwụ, ọ dị mma ka ihe anyị nwere ju anyị afọ.
Matiu 19:24: “Ọ dịịrị kamel mfe isi n’anya agịga gafere karịa ọgaranya ịba n’alaeze Chineke.”
Ihe ọ pụtara: Jizọs gwara nwa okorobịa bara ọgaranya ka ọ bịa bụrụ onye na eso ụzọ ya. Nwoke ahụ ekweghị n’ihi na obi ya dị n’ọtụtụ ihe ndị o nwere. Ọ bụ ya mere Jizọs ji dọọ anyị aka ná ntị. Onye hụrụ akụnụba n’anya karịa Chineke agaghị enweta ndụ ebighị ebi.
^ par. 1 Na Baịbụl ụfọdụ, otú e si sụgharịa amaokwu a bụ: “Ịhụ ego n’anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile.”
Ọrụ na Ego
Olee otú ikwesị ntụkwasị obi na ikwu eziokwu si eme ka udo dị n’ezinụlọ?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Ego Ọ̀ Bụ Mkpọrọgwụ nke Ihe Ọjọọ Niile?
ijwbq isiokwu 166